﻿﻿ XOG: Madaxweyne Farmaajo oo magaaabaya Saraakiil uu ka mid yahay Gen. Yuusuf Indha-cadde | Codkagalmudug isha Laga Helo Wararka Xaqiiqda
XOG: Madaxweyne Farmaajo oo magaaabaya Saraakiil uu ka mid yahay Gen. Yuusuf Indha-cadde
Apr 18, 2017 - jawaab
Warar isa soo taraya ayaa sheegaya in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo taliyaha cusub ee ciidamada xoogga ay wadaan isbedel lagu sameynayo taliyeyaasha iyo hogaannada ciidamada.
Madaxweyne Farmaajo oo dhowaan xilalka ka qaaday taliyeyaasha ciidamada ayaa si gaara xoogga u saaraya dib u habeynta saraakiisha ciidamada iyo hogaannada kala duwan, waxaana la sheegay inuu kulamo gaara a yeeshay saraakiil gaareysa 9 oo hore ula soo shaqeeyay.
Saraakiisha xilalka loo magacaabayo ee uu daneynayo madaxweyne Farmaajo waxaa ugu horeeya Gen. Yuusuf Maxamed Siyaad Indha-cadde oo hore u soo noqday wasiiru dowlaha Gaashaandhigga, lana soo shaqeeyay Farmaajo xilligii uu haa Ra’iisal wasaaraha 2011.
Madaxweynaha ayaa xafldii xuska 57 guurada ciidamada xooggga u yeeray dhammaan saraakiishii ay hore u wada shaqeeyeen oo uu ka dhex muuqday Gen. Indha-cadde isagoo sheegay inay yihiin raggii Xamar ka saaray Alshabaab.
ordering tinidazole Alshabaab oo caawa soo galay deegaano Hoos yimaada Cadaado
see url Sawiro-Xaaf iyo wasiirka qorsheynta Soomaliya oo kormeeray Halka laga dhisayo dakada Hobyo.
purchase gabapentin Sawiro-Madax badan oo gaartay Hobyo…